Nifarana ny tetikasa Page (Projet d’appui à la gestion de l’environnement) fiarovana ny tontolo iainana any amin’ny faritra Atsimo Andrefana, nandritra ny dimy taona. Tetikasa niarahana amin’ny fokonolona sy ny firaisamonim-pirenena. Fahombiazanna no hita momba ny fitantanana ny ala sy ny tontolo iainanana rehetra. Niombon-kevitra sy nitovy fomba fijery momba izany ny tompon’andraikitra ao amin’ny faritra. Natolotry ny tetikasa Page ny talem-paritra momba ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy any Atsimo Andrefana ny 90 % amin’ireo fitaovana, kojakoja samihafa, miampy fiara 4×4. Fanomezana soratana ho fananam-panjakana. Ny tetikasa Page no mifarana fa ny asa mitohy hatrany.
Lasa alohan’ny fotoana ny lavanila matoy any amin’ny distrikan’i Maroantsetra koa mangataka ny hanokafana ny taom-piotazana, amin’ny 8 jolay izao ny fikambanan’ny ben’ny Tanàna. Ny lalàna navoakan’ny fanjakana, mbola amin’ny 15 jolay izany taom-piotazana izany nefa tara loatra satria efa betsaka ny matoy ny lavanila ka hatahorana ho simba, tsy ho lafo. Izay ihany koa ny mampirongatra ny halatra. Na izany aza, misy fahasamihafana, araka ny toe-tany ao amin’ny faritra ihany ny famasahany, koa anjaran’ireo ben’ny Tanàna ny mamaritra ny fotoam-piotazana.
Mahatsiaro sahirana ny maro amin’ireo kaoperativa mpitatitra eto an-dRenivohitra, na efa nahemotra ho amin’ny 7 ora hariva aza ny fotoam-piasana farany. Ny sasany aza milaza fa tsy tafaverina na ny vidin-tsolika nammmpiasaina. Ny antony, hoy izy ireo, sahirana ny vahoaka mpandeha, ferana ihany koa ny isan’ny mpandeha ao anaty fiara arak any fepetra tsy mmaintsy arahina. Efa zatra mody aloha indray ny mpandeha izao, matahotra, mitandrina. Miankina amin’ny mpanome, toy ireo tobin-tsolika, ny ahazoana ireny gel fidiovana ireny fa tsy hita indray izany izao ny avy amin’ny fanjakana.
Nahitana fahombiazana ny fiaraha-miasa eo amin’ny faritra Menabe sy ny Durell momba ny fiarovana ny ranovory Ambondrombe, mirefy 7000 ha. Asa fiarovana ny ranovory miainga avy amin’ny fomban-drazana. Afa-po ny Durell, miara-miasa amin’ireo mpanjono mahita fa manara-penitra ny fitaovana ampiasan’izy ireo mpanjono. Hita mitombo ao Ambondrombe koa ireo zavaman’aina hafa, toy ny karazam-borona. Tsara ho marihina fa mahasarika mpizahatany maro sy mpanao fikarohana momba ny siansa tonga isan-taona ao amin’ity faritra ity.